RAHARAHA ANJOZOROBE : Mangataka onitra koa ireo niharan-doza
Ankoatra ilay sazy 18 volana an-tranomaizina, sazy mihatra izay nomen’ny mpitsara ny tompon’ilay kamiao sy ny mpamilin’ny fiara nitera-doza tany Anjozorobe, ny fiandohan’ny herinandro lasa teo dia milaza ny mbola hangataka onitra ho fanoherana ny ratra sy ny famoizan’aina ihany koa ny fianakavian’ireo niharan-doza. 11 août 2017
« Nahafa-po anay iny didim-pitsarana iny. Saingy kosa manoloana ny takaitra sy ny ratra ary ny famoizavana havana ho an’ireo niharan-doza dia tsy maintsy mangataka onitra izahay” hoy ny fanazavana nomen’ny ben’ny tanànan’ Ambongamarina, ao anatin’ny Distrikan’Anjozorobe. Fantatra araka izany fa tsy manaiky hipetra-potsiny tamin’iny sazy nivoaka iny ireo niharan-doza fa mbola mangataka vola ho onitry ny fitsaboana ireo naratra sy ny lany rehetra tamin’ny fikarakarana ny razana ny fianakavian’ireo olona tra-doza tao anatin’iny kamiao be iny.
Araka ny vaovao voaray dia efa mandeha any amin’ny tribonaly ity raharaha mahakasika ny fangatahana onitra ity, ka amin’ny 22 aogositra ho avy izao no hivoaka ny didy. “Izahay tsy mamaritra ny onitra fa samy manana izay lanin’ny tamin’ny fitsaboana ireo naratra avy ny havany.
Ny vola lany tamin’ny fitsaboana ireo tapa-tanana ohatra tsy hitovy velively amin’ny vola lany nanasitrana ireo vaky loha, ka miankina amin’izay ny onitra takian’ny tsirairay”, hoy hatrany ny fanazavana noentin’ny ben’ny tanàna. Amin’ny ankapobeny anefa dia nambarany fa saika manodidina ny efatra hetsy sy iray tapitrisa Ariary avy ny onitra takian’ireo niharan-doza.
Mahakasika ilay lozam-pifamoivoizana teny Ankazobe kosa dia mbola mandeha ny fanadihadiana rehetra ataon’ny mpitandro filaminana. Fantatra fa efa nivoaka ny hopitaly ilay mpamily ary mbola miatrika ny famotorana lalina hatreto. Ity farany izay tsy maintsy iharan’ny sazy henjana raha ny fanazavana nomen’ny talen’ny sampan-draharahan’ny fitsirihana fiara eny Alarobia izay nanaporofo fa tsy ara-dalàna tanteraka io fiara nampiasaina mbola nitondra olona io.